ပုံနှိပ်ဝန်ဆောင်မှု, စက္ကူပုံနှိပ်ဝန်ဆောင်မှု, စက္ကူပုံနှိပ် - ဖူထုတ်ဝေရေး
CD ကို Folder ကို
ဖူထုတ်ဝေသူတွေကတော့ TRADING CO ။ , LTD မှ
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး + 86-591-87502943 အားဆင့်ဆိုရမည်
တစ်ဦးအစိုးရပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သောတရုတ်ဖူ, ဖူ, အရှေ့တောင်ဘက်တွင်အောက်တိုဘာ 1980 ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖူထုတ်ဝေရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ, ။ ဒါဟာဖူပြည်နယ်ရှိ9ထုတ်ဝေအိမ်များနှင့် 73 စာအုပ်စတိုးဆိုင်ခဲ့သည့်လက်အောက်ခံ Haixia ထုတ်ဝေရေး၏ကုမ္ပဏီနှင့်ဖြန့်ဖြူး Group မှဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါတို့သည်အမေရိက, ကနေဒါ, ဥရောပ, သြစတြေးလျ, နယူးဇီလန်နှင့်အာဖရိကမှသညျ လာ. သူတို့ထဲကအများစုဟာ3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါပွီ 30 နီးပါး years.Our ဖောက်သည်များအတွက်စက္ကူပုံနှိပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုပွုပါပွီ။ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုရုံးထဲမှာ 23 ထမ်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကက်တလောက်စာအုပ်, မဂ္ဂဇင်း, လက်ကမ်းကြော်ငြာနဲ့အခြားထုတ်လုပ်နိုင် ...
စက္ကူပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအနှစ် (၂၀) ​​ကျော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အမေရိက၊ ကနေဒါ၊ ဥရောပ၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နှင့်အာဖရိကမှဖြစ်သည်
3. ဖောက်သည်အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် (၃) နှစ်တာကာလအတွင်းပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကတ်တလောက်၊ စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊
ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိစာဖတ်သူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားတရုတ်စာအုပ်များကိုမိတ်ဆက်ရန်ပြည်ပရှိတရုတ်စာအုပ်ပြပွဲများကိုလည်းကျင်းပခဲ့သည်
Q1 ။ မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကဘာလဲ
A1 ။ FUPITC သည်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ကိုစောင့်မျှော်နေသောကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားသောနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု ၀ န်ထမ်း ၂၃ ယောက်နှင့်အရည်အသွေးမန်နေဂျာများရှိသည်။
Q2 ။ သင်၏ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားမည်မျှရှိသနည်း။
A2 ။ စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်နှင့်အခြားစက္ကူပုံနှိပ်ခြင်းများထုတ်လုပ်နိုင်သည်
Q3 ။ ကျွန်တော်အစမ်းပမာဏကိုနည်းနည်းလောက်လုပ်လို့ရမလား။
A3 ။ သေချာတာပေါ့။ FUPITC သည်သင်လိုချင်သောပမာဏကိုသာပြောပါ၊ ဈေးနှုန်းကိုစစ်ဆေးပြီးသင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖော်ပြပေးပါမည်။
Q4 ။ နမူနာဘယ်လိုအမြန်ရနိုင်မလဲ။
A4 ။ အသေးစိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိုလျှင်အသေးစိတ်များကို ၄ ရက်အတွင်းသင်ပြောပြနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၁၀ ရက်အတွင်းသင်ရရှိနိုင်သည်။
Q5 ။ သင်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏ ဦး ဆောင်အချိန်ကဘာလဲ?
A5 ။ ၎င်းသည်သင်လိုအပ်သောပမာဏပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ ရက်မှ ၄၀ အတွင်းဖြစ်သည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားဆက်သွယ်ပါမည်။
ဖက်စ် 0086 591 8753 8936
စက္ကူ (အထူးစာရွက်) စာအုပ်ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ကလေးများ၏ hardcover စာအုပ်
cardbord စာအုပ် FPTCB001
hardcover စာအုပ် FPT007
softcover စာအုပ် FPT005
ပိုကောင်းတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သစ်ကိုဘွားမှအဟောင်းကိုမှတဆင့် weeds ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အားရင်းနှီးခင်မင်စွာသင်တို့သည်ငါတို့၏တောက်ပအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်မည်သည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို join ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
cd folder ကို FPTCF002
cd folder ကို FPTCF001
softcover စာအုပ် FPT002
Adress: 13 / F ကို, ဖူထုတ်ဝေရေး Center က Bldg, 76 Dongshui လမ်း, ဖူ, ဖူ, တရုတ်။ ။
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-591-87502943
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်သို့သွားရောက်: မြေပုံ View
Sign Up နှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုရယူပါ
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2019: All Rights Reserved ။ လမ်းညွှန် ၊ Hot ထုတ်ကုန်များ ၊ မြေပုံအညွှန်း ၊ amp မိုဘိုင်း
ကလေးစာအုပ်ပုံနှိပ် , အော့ဖ်စက်ပုံနှိပ်ခြင်း , လက်ကမ်းစာစောင်များပုံနှိပ် , သုံးစွဲနည်းစာအုပ်ငယ်ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ပုံနှိပ် , Hardcover စာအုပ်ပုံနှိပ်, စာအုပ်ပုံနှိပ်ခြင်း ၊